Akanakisa nhetembo mabhuku akamboitika | Zvazvino Zvinyorwa
Kutenda kune pasocial network, nhetembo dzinoita sedzinosiya kurara kwenguva refu kuti dzorezve nzvimbo kwayo chaiyo. Chinzvimbo chakatsaurwa nanyanduri vakura nevatauri vakawana mumavhesi nzira yakakwana yekutsanangudza nyika, kuita kuti matemba ayo azununguke uye achinje manzwiro ave mazwi. Izvi mabhuku akanakisa enhetembo vanotsanangura kushanduka kwehunyanzvi hwusingaperi uye husingagumi iyo, zvakadaro, isingamire kuzvivandudza.
1 Akanakisa mabhuku enhetembo
1.1 Iliad, naHomer
1.2 Rhymes uye Nhoroondo, naGustavo Adolfo Bécquer
1.3 Mashizha eGrass, naWalt ​​Whitman
1.4 Nhetembo, naEmily Dickinson
1.5 Nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekusuwa, naPablo Neruda
1.6 Nyanduri muNew York, naFederico García Lorca
1.7 Ariel naSylvia Plath
1.8 Nhetembo Anthology, naMario Benedetti
1.9 Dzimwe nzira dzekushandisa muromo wako, naRupi Kaur
Iliad (New Library ...
ChiGiriki chirevo icho Ini ndaizogara ndichichinja kumadokero mabhuku Yakanga iri zvakare nhetembo huru yekutanga enziyo dzedu. Kunyangwe zuva rayo rekuburitsa risingazivikanwe, zvinofungidzirwa kuti Iyo Iliad inotangira pane imwe nguva muzana remakore rechisere BC uye inosanganisira 15.693 ndima Ivo vanoratidza kutsamwa kwaAchilles mukati megore rekupedzisira reTrojan War, guta rinozivikanwa seIlion, muchiGreek. Yese yakasarudzika.
Rhymes uye Nhoroondo, naGustavo Adolfo Bécquer
Ngano Uye Rhymes (Kirasi ye ...
Mumiriri we kudanana iyo yaakaedza kuvhurira matsva ekunyora, Bécquer aigara zvakaipa muMadrid kwechikamu chikuru chehupenyu hwake asina kuona chikamu chebasa rake rakaburitswa. The Rhymes izvo zvinoumba iri vhoriyamu zvakaburitswa neshamwari dzake makore mushure mekufa kwake, nguva pfupi mushure mekunge moto wave kuda kuvadzinga. The leyends inosanganisirwa yakaburitswa muhupenyu hwese hwemunyori. Hupenyu hwakagadziriswa nezvinyorwa zvakaita rudo, kufa kana mareferenzi kune iwo chaiwo mabhuku akanyorwa naBécquer uye anowana mumapeji ebhuku rino kuvhurwa kwenyika yemhando itsva uye mavara.
Ungada here kuverenga iyo Rhymes uye Nhoroondo dzeBeccquer?
Mashizha eGrass, naWalt ​​Whitman
Mashizha eGrass ...
Kubvumirana kunoonekwa se mudetembi mukuru weAmerica yenguva dzese, Whitman akashanda Mashizha eGrasspanguva yakawanda yehupenyu hwake, zvekuti yekutanga vhezheni yakashandurwa pazviitiko zvakawanda mumhando dzakasiyana. Chekupedzisira, nhetembo dzekutanga dzakanunurwa, kuitira kuchengetedza kusagadzikana kwemunyori akataura nezvake hukama hwake nemasikirwo, aine nguva yaaifanira kurarama uye kunyangwe yemutungamiriri saAbraham Lincoln kwaari waanokumikidza elegy. Kusiyana nehumweya hwakapfuuridza kudanana, Whitman aiziva nzira yekupa nhetembo yezana ramakore rechiXNUMX nehuwandu uye chimiro, zvekunyanya kuda zvinhu zviri mumurume anozivawo kufunga nekuvapo.
Nhetembo, naEmily Dickinson
Nhetembo (Austral Poetry)
Kunyangwe iyo nhetembo dzinodarika mazana mapfumbamwe iyo American Emily Dickinson akanyora achiri mupenyu, mashoma acho akaburitswa. Muchokwadi, avo vakaona mwenje munguva yehupenyu hwemunyori vakagadziridzwa nevamwe vapepeti vasina kumboshinga kuratidza nyika nhetembo yakasarudzika yemukadzi uyu, yakavharirwa kwehupenyu hwake hwese mukamuri. Izvo zvaisazove kusvika parufu rwake, muna 1886, apo munin'ina wake paakawana nhetembo dzese ndokudzizivisa pasi rose. Kuchengetwa neBhaibheri uye kuseka kweAmerica, kufamba pakati kufa nekusafa izvo zvakamukurudzira zvakanyanya, Dickinson anoonekwa seimwe yeiyo hukuru hukuru hwenhetembo dzeUnited States.
Verenga Nhetembo dzaEmily Dickinson.
Nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekusuwa, naPablo Neruda
Nhetembo makumi maviri dzerudo uye ...
«"Ndinozvifarira kana iwe ukanyarara nekuti unenge usipo."
Imwe ye nhetembo dzakakurumbira kwazvo dzetsamba dzeSpanish Icho chikamu cheiri bhuku, rekutanga naNeruda uye rakaburitswa nemunyori weChile muna 1924 aine makore 19 chete. Kuita kushandisa ndima yeAlexander uye chimiro chake chaakamboedza kubva pachokwadi chakatangira mumabasa ake ekutanga, bhuku iri rakaumbwa nhetembo makumi maviri dzisina zita uye yekupedzisira, Rwiyo Rwakashushikana, runopfupisa manzwiro emunyori kune rudo rwake rwehudiki. . Imwe ye anonyanya kukosha mabasa muSpanish yezana ramakore rechiXNUMX, zvirokwazvo.
Iwe haugone kumira kuverenga Nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekupererwa.
Nyanduri muNew York, naFederico García Lorca
Nyanduri muNew York: ...
Musi waAugust 18, 1936, Federico García Lorca akapfurwa kumwe kunhu pakati peViznar naAlfacar, kuGranada, ichisiya senhaka muunganidzwa wakakosha kwazvo wenhetembo dzaAndalusia waaida zvakanyanya uye anoshanda sa Nyanduri muNew York. Yakaburitswa posthumous muna 1940 mune maviri akasiyana akasiyana edhisheni asi zvisingawirirane nemumwe nekuda kwezvikonzero zviri pachena, basa guru raLorca raive kubatanidzwa kwemunyori, yemurume uyo muguta reNew York kwaaigara pakati pa1929 na1930 akaedza kumutsa runako rwakachena, kure nemaindasitiri, hupfumi uye rusaruraganda izvo zvakakunda muUnited States. Basa iro Lorca, mukuora mwoyo panguva iyoyo, anovhura pasi rose achiedza kutsvaga yake yakanakisa vhezheni.
Ariel naSylvia Plath
Asati azviuraya muna 1963, Sylvia Plath akapedza muunganidzwa wenhetembo dzakanzi Ariel kuti ibudiswe nemurume wake uye mubatsiri wezvekunyora, Ted anombundira, gore rimwe gare gare. Iyo gakava rakauya apo basa rakagadziriswa naHughes, uyo vakabvisa dzimwe nhetembo dzaivepo uye akawedzera zvimwe zvisina kuburitswa kuitira kudzora hunhu hudzokororwo kubasa, izvo zvakashoropodzwa uye zvakadzivirirwa zvakaenzana nenyanzvi. Basa racho, kumonyanisa kunoshamisa kana kuchienzaniswa nemabasa akapfuura aPlath, kunovimba nemasikirwo sejira rechiratidzo chemunyori.
Nhetembo Anthology, naMario Benedetti
Nhetembo anthology. Wepa...
Uruguayan pfupi nyaya munyori uye munyori, Benedetti akapawo chikamu chakakura chehupenyu hwake kunhetembo. Hupenyu hwezuva nezuva, hwakakwidziridzwa senge epic injini uye yakarongedzwa nerudo nezvematongerwo enyika, kuseka nekuratidzira, vakadzi uye ndangariro, zvinowanda pamapeji eichi Nhetembo anthologyrakaburitswa muna 1984. Yakanakisa sarudzo kana zvasvika pakuwana akanakisa mavhesi emunyori mune imwechete vhoriyamu.
dzimwe nzira dzekushandisa ...
Izvo zvese zvakatanga paaccount ye Instagram mune iyo nyanduri weCanada Indian Rupi Kaur akatanga kuburitsa akatorwa kubva pabasa rake. Mwedzi yakati gare gare, uye mushure memufananidzo wemunyori achisiya kungoenda kumwedzi pamubhedha kwakachinja mafaro enhau, Kaur akaburitsa mabhuku maviri: Mukaka neuchi (Dzimwe nzira dzekushandisa muromo wako, munyika medu) uye Zuva nemaruva ake, mabasa anounza nhetembo kune izvi uye zvizvarwa zvinotevera uko pasina kushomeka kwezvinongedzo kumatingindira akadai feminism, kusuwa kwemoyo kana kutama.
Ndezvipi zvako mabhuku akanakisa enhetembo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Akanakisa mabhuku enhetembo
Pasina Vallejo iyo rondedzero haina kuvimbika